China Auto EPP / ETPU / EPO mpanamboatra sy mpamatsy | Welleps
PP Poly 发泡 anded ， 是 一种 性能 卓越 的 高 结晶 型 型 聚合物 聚合物 复合 材料 以其 型 聚合物 优越 性能 PP Poly Poly Poly
循环 使用: EPP 制品 柔韧 性 好, 可 反复 使用, 不易 破碎
EPP (Expansion Polypropylene) dia karazana fitaovana vita amin'ny polymer / gazy vita amin'ny kristaly avo lenta, miaraka amin'ny fahombiazany tsara mba ho lasa fiarovana sy fiarovana ny tontolo iainana mitombo haingana indrindra.
Fitrohana angovo: satria ny vokatra EPP dia manana firafitra pore bubble manokana, afaka mandray tsara ny angovo avy any ivelany amin'ny fomba mahomby izy io, ary afaka manohitra tsara ny asa fanaovan-gazety.
Fanodinana: ny vokatra EPP mora miovaova azo ampiasaina miverimberina fa tsy mora vaky.
EPP 制品 的 应用 领域 广泛, 主要 应用于 汽车工业 领域, 如 汽车 保险杠, 汽车 侧面 防震 芯, 汽车 车门 防震 芯, 高级 安全 汽车 座位 椅 等.
Ireo vokatra EPP izay be mpampiasa amin'ny indostrian'ny fiara, toy ny bumper fiara, ny lozisialy manoloana ny fiara, ny varavarana, ny seza fiara azo antoka sns
NY FOMBA FIASA INDRINDRA ITY MASINA ITY
Mba handraisana vokatra samihafa, ity milina fanindronana ity dia misy takelaka bobongolo maro be, ny refy dia manodidina ny 600 × 800 mm ary ny max. Ny refy dia hatramin'ny 1200 × 1400 mm. Ity milina ity dia miaraka amin'ny rafitra hydraulic dingana roa, ny rafitra fihinanan-tsakafo, ary ny rafitra angovo afovoany, ny fanamaivanana, ny fitoeran-drano mitazona, ny rafitra fanefitra, ny rafitra voafehy amin'ny solosaina, ny rafitra fanaraha-maso ny dizitaly ary ny efitrano etona.
NY TOE-KEVITRA MASINA
Ity rafitra ity dia tsy mitaky menaka fanosorana. Ny varingarina hydraulic dia napetraka ao amin'ny lafiny roa amin'ny famonoana miaraka amin'ny hery fametahana bobongolo aza. Afaka mitazona ny hafanana ilay dôma tsy misy fangarony. Ny fanokafana ny bobongolo sy ny fanidiana ny bobongolo dia tantanan'ny rafitra informatika izay afaka miantoka ny maha-ara-tsakafo tsara indrindra. Ny hetsiky ny famoahana ny bobongolo dia fehezin'ny rafitra fanesorana mba hanomezana kalitao tsara indrindra ny vokatra mazava tsara mandritra ny dingan'ny fanesorana.
NY LAYOUT Ity milina ity
Ity masinina ity dia natao ho sehatra malalaka telo-habe. Ity famolavolana habaka misokatra ity dia hampiorina ny fizotry ny fanovana ny bobongolo ary afaka manova ny bobongolo avy eo aloha, aoriana ary amin'ny lafiny roa amin'ity milina ity ireo mpandraharaha. Ary koa, ity milina ity dia azo apetraka mivantana amin'ny tany tsy misy sehatra. Mba hiarovana ny fiarovana ireo mpandraharaha, ity milina ity dia manana vavahady fiarovana sy rafitra fiarovana.
Ity bobongolo ity dia vita amin'ny endrika lovia telo. Ny angovo bebe kokoa dia azo tahirizina tsy misy famonoana ary noho izany, ny takelaka bobongolo dia azo ampiasaina betsaka. Ny tsimatra sy ny basy fitifirana dia apetraka ao anaty lovia mihetsiketsika bobongolo mba hiantohana ny fiarovana ny fandidiana. Mba hampihenana ny fotoanan'ny sampy, ity rafitra ity dia manome ny fametrahana bobongolo haingana kokoa sy ny rafitra fanovana.
Ny rafitra hydraulic dingana roa dia manome safidy hafainganam-pandeha roa (haingana sy miadana) amin'ny fanidiana ny bobongolo sy ny fanokafana ny mould. Ary koa, mihena ny ora fanodinana.
SISTEMA ENERGIA TENY
Ity masinina ity dia manana rafitra angovo afovoany feno izay vokarin'ny orinasanay Ny etona sy ny rivotra rehetra izay ilaina mandritra ny fizotran'ny tsindrona dia fehezin'ny vavahady rafitra angovo afovoany. Ity rafitra ity dia hanome na dia ny fidirana amin'ny rivotra aza ary azo ahitsy mora kokoa. Ity rafitra etona ambany tsindry ity dia natao miaraka amin'ny fantsona sy valves mihalehibe izay afaka manome fepetra miasa tsara indrindra.
NY DAMPERA MAMONO NY FANORENANA
Ny fanitsiana ny tsindry angovo dia tena zava-dehibe. Eo ambanin'ny tsindry ambony setroka ambony dia ho lava ny fotoana famokarana ary handany angovo bebe kokoa. Na izany aza, ny vokatra farany dia mety ho simba ary ny endrik'ilay vokatra dia mety hisy vokany rehefa ambany loatra ny tsindry. Miasa ny damper fanampiana rehefa mamoaka lasitra sy manafana ny bobongolo. Ny rivotra voafehy dia ampiasaina hamenoana ary hampihena ny fanjifana angovo sy hanome vokatra avo lenta ity «damper» ity.
NY TANY RANO FANORENANA
Ny milina dia miaraka amina andiana fihazonana rano misy tsindry izay misy fidirana roa samihafa ho an'ny rano mangatsiaka sy ny condensate.
Ny rafitra banga dia miaraka amin'ny paompy Liquid Ring Vacuum sy condenser izay manome fahamendrehana mahomby kokoa. Raha tsy misy dingana fanamainana fanampiny, azontsika atao ny manafaingana ny tsindrona amin'ity rafitra fantsona ity. Ny famoahana ny bobongolo dia mora vita ary koa mamonjy angovo bebe kokoa.
SISTEM mifehy ny KOMPIERA
Ity milina fanindronana ity dia miaraka amin'ny rafitra voafehy amin'ny solosaina izay misy ny asan'ny tonian-dahatsoratra sy fanitarana. ny dingana rehetra amin'ny fiasa dia voafehin'ny rafitra fanaraha-maso ny hadisoan'ny rafitry ny solosaina ary aseho eo amin'ny efijery ny maodely rehetra izay apetraka miaraka amin'ity rafitra compute ity izay mampiseho ny fomba fiasa, ny fametrahana ny fotoana ary ny valin'ny fanindriana ny laharam-pahamehana dia hametraka ny tsindry.
Afaka mamolavola milina mifanaraka amin'ny takian'ny antsipirian'ny mpanjifa isika.
Previous: Milina famolavolana endrika mihombo miaraka amin'ny vacuum
Manaraka: EPP (Polypropylene nitarina)